कसरी नजिकिए ओली र ठाकुर ? – Himal eNews
२०६२/६३ को जनआन्दोलनयता फरक दुईधारको नेतृत्व गर्दै आएका ओली र ठाकुरको हात जसरी मिल्यो , पछिल्लो कालमा मन पनि उसै गरी मिलिरहेको छ । संघीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ बोकेका ठाकुर र कुनै समय मधेसका मुद्दामा अत्यन्तै अनुदार भनिएका ओलीको मन मिल्नुको कारण के होला ? ठाकुर भन्छन्, ‘पुराना कुरा इतिहास भए, अहिले परिस्थिति बदलियो ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार केहीबेर सहभागी भएर उनी बबरमहलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा सरकारसँग वार्ता गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वार्ताबारे ब्रिफिङ गर्न पर्खिरहेका थिए । शुक्लाको ब्रिफिङले उनी केही आशावादी रहेछन् ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
गत वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० मा एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टीको एउटै छाताभित्र रहेका दुई शक्ति अहिले परस्पर विरोधी धारमा उभिएका छन् । ओलीप्रति हमेसा खरो आलोचक रहँदै आएको ठाकुर समूह अहिले उनैसँग बाक्लो हिमचिम गरिरहेको छ ।
विश्लेषक सीके लाल मालिकहरूको झगडामा जसले जित्ने हो, त्यसको पछि लाग्दा नै फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेरै ठाकुर समूह ओलीनजिक भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता भनेको एउटा सरकार हो, एउटा प्रतिपक्षी हो । कांग्रेसको भूमिका हेर्ने हो भने अहिले प्रतिपक्षी त छै न । जब दुइटै एउटै हुन् भने दुइटामा जोसँग सरकार को लगाम छ, त्यहीसँग नजिक हुन सहज भयो नि त,’ लालले भने, ‘जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, उसले त मधेसको मुद्दालाई ठूलो धोका दिएको छ ।’
मुखर्जीको निधन : नेपालले महान् मित्र गुमाएको छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीले विदेशी पर्यटनमन्त्रीसँग भन्नुभयो, ‘यहाँको समाज असल र सहयोगी छ’
प्रचण्डजी र म भर्खर लभ परेको जोडी होइनौँ, अर्कालाई भेट्यो कि ठुस्किने’